Apple Inoburitsa Maviri Matsva Ehoridhe Ads eApple Watch Series 2 | Ndinobva mac
Apple Inoburitsa Mbiri Nyowani Yezororo Ads eApple Watch Series 2
Kisimusi iri kuuya uye Apple inoda kuti vese vashandisi vakwanise kuve neApple chigadzirwa. Uchapupu hweizvi ndidzo mbiri kushambadza dzakaburitswa nhasi zvinoshamisa uye izvozvi pane YouTube chiteshi muUnited Kingdom uye kwete zvakajairika. Tichaona kana ichionekwa mune huru mukati maawa.
Izvo zviviri kushambadza zvatiri kutaura nezvazvo zvinobva Nhepfenyuro dzeApple 2, wachi yakatakurwa nezvinhu zvitsva uye nekuvandudza izvo zvinoita kuti iite zvakawanda kupfuura iyo yekutanga modhi, kunyanya nekuti Inogona kunyudzwa mumvura uye ine yayo GPS.
Apple yakaparura zviziviso zviviri zvitsva iyo yakanzi "Endai Mhanyai" y "Enda Unotamba". Aya ma ads maviri anoratidza kuvhurwa kweApple Watch Series 2 iyo yakapihwa yeKisimusi. Mune chimwe cheshambadziro tinoona a Apple Watch Series 2 Sport neRed Fluoroelastomer Band uye mune yechipiri, yakasarudzika Apple Watch Nike + iyo, sekuziva kwedu tese, inouya neakasarudzika micheka-yakapetwa tambo uye iyo Nike skrini-yekudhinda.
Mune ese ma ads kusimbiswa kunoiswa pabasa rekusimba kweApple Watch uye ndezvekuti iwe unogona kuona kuti vese protagonists vanokwanisa sei kupedzisa zuva nezuva chiitiko chemuviri icho Apple Watch chakagadzwa nemushandisi. Pasina imwezve ado, isu tinokusiya iwe nemaviri mavhidhiyo, mavhidhiyo ayo ari chokwadi kupfuurisa zviuru zvevashandisi vanozopedzisira vatenga imwe yeaya anoshamisa ekuona.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple Inoburitsa Mbiri Nyowani Yezororo Ads eApple Watch Series 2
Siri uye mimhanzi inodzorwa paMac yako neApple's EarPods
MIT vadzidzi vanopedza mhemberero 2017 nekutora chikamu kwaTim Cook